श्रीलंका बम आक्रमणमा ट्रंपले १३ करोडको मुत्यु भएको भन्दै सम्बेदना दिएपछि…. | Seto Khabar
श्रीलंका बम आक्रमणमा ट्रंपले १३ करोडको मुत्यु भएको भन्दै सम्बेदना दिएपछि….
श्रीलंकाको राजधानी कोलंबोमा भएको आठ सिलसिलेवार बम आक्रमणलाई लिएर विश्वभरका नेताहरुले निन्दा गरेका छन् । यता, अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपले आफनो ट्वीटमा गल्तीले मृतकको संख्या १३ करोड बताएका छन् ।
यद्यपी, केही मिनेटमै त्यो ट्विटलाई उनले डिलेट गरेका छन् । तर सोशल मिडियामा मानिसहरु ट्रंपको यो गलत ट्वीटको स्क्रिनसटसँगै आफनो प्रतिक्रिया दिन थाले । यसपछि ट्रंपले पुरानो ट्विटलाई डिलेट गरे पश्चात एक नयाँ ट्वीट गर्दे आफनो गल्तिलाई सुधारेका छन् ।
नयाँ ट्विटमा अमेरीकी राष्ट्रपति ट्रंपले लेखेका छन् “श्रीलंकाको चर्च र होटलमा आतंकवादी आक्रमणमा १३८ मानिसहरु मारीएका छन र ६०० भन्दा बढि मानिसहरु गम्भिर घाइते भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरीका यी माहान ब्यक्तिहरु प्रति हार्दिक समवेदना ब्यक्त गर्दछ । हामी मद्यतको लागी तयार छौ ।”